Refund policy – Cleaning Hub Centurion. Factory shop
Umgaqo-nkqubo wethu uhlala kwiintsuku ezili-14 ukusuka kumhla wokuthenga;
Ukubuyiswa kwe-B2B ngenxa yokuthenga ngempazamo kubathengi kungabuyiselwa (kuncitshiswe intlawulo yokuphatha engekho ngaphantsi kwe-15%) kodwa AKUKHO mbuyekezo iya kwenziwa. Umthengi uya kufumana ikhredithi kwiakhawunti yakhe abanokuthi bazobe ngayo imveliso okanye umthengi asicele ukuba siyithengise iimveliso egameni labo ngentlawulo ekuvunyelwene ngayo.
QAPHELA: Ii-odolo ezizodwa apho sifumene khona izinto ezingezizo ezesitokhwe okanye saza songeza isitokhwe esongezelelekileyo egameni labathengi, akunakubuyiselwa okanye kutshintshiswane ..
Ukuba awanelisekanga ngokupheleleyo ngezinto zakho zokuthenga unokubuyiselwa ngaphakathi kwixesha lokubuyiselwa kwemali okanye lokutshintshiselana.
Ukuba iintsuku ezili-14 zidlulile ukususela ekuthengeni kwakho, ngelishwa asinakukubonelela ngembuyekezo okanye utshintshiselwano.
Ukulungela ukubuya, into yakho mayingasetyenziswa kwaye ikwimeko efanayo nale uyifumeneyo. Kuya kufuneka ukuba ibekho kwimpahla yokuqala.
Iindidi zeempahla azixolelwanga ekubuyisweni umz. Izinto ezinokutsha azinakubuyiselwa.
Ukugcwalisa ukubuya kwakho, sifuna irisithi okanye ubungqina bokuthenga.
Kukho iimeko ezithile apho kunikwa imbuyiselo yenxalenye kuphela: (ukuba kufanelekile) izinto ezineempawu ezibonakalayo zokusetyenziswa
Nawuphi na umba ongekho kwimeko yawo yoqobo, wonakele okanye ulahlekile ngenxa yezizathu ezingekho ngenxa yempazamo yethu.
Nayiphi na into ebuyisiweyo ngaphezulu kweentsuku ezili-14 emva kokuziswa okanye ukuqokelelwa
Ukubuyiselwa imali (ukuba kufanelekile)
Nje ukuba ukubuya kwakho kufunyenwe kwaye kuhlolwe, siya kukuthumela i-imeyile ukukwazisa ukuba siyifumene into yakho ebuyisiweyo. Siza kukwazisa ngokuvuma okanye ukwaliwa kwembuyekezo yakho.
Ukuba uvunyiwe, imali yakho iyakubuyiselwa, kwaye ikhredithi iya kusetyenziswa ngokuzenzekelayo kwikhadi lakho lekhredithi okanye indlela yokuqala yokuhlawula, kwiintsuku ezingama-20 zokusebenza.
Ukubuyiselwa kwemali emva kwexesha okanye ukulahleka (ukuba kufanelekile)
Ukuba awukafumani mbuyiselo okwangoku, qala ujonge iakhawunti yakho yebhanki kwakhona.
Emva koko nxibelelana nenkampani yekhadi lakho letyala, kungathatha ixesha ngaphambi kokuba ubuyiselwe imali yakho ngokusemthethweni.
Emva koko qhagamshelana nebhanki yakho. Kukho amaxesha athile okulungisa ngaphambi kokuba kubuyiswe imali.
Ukuba ukwenzile konke oku kwaye awukafumani mbuyiselo yakho, nceda unxibelelane nathi ku sales1@cleaninghub.co.za
Izinto zokuthengisa (ukuba kufanelekile)
Kuphela zizinto ezinamaxabiso aqhelekileyo ezinokubuyiselwa imali, ngelishwa izinto zentengiso azinakubuyiselwa.
Utshintshiselwano (ukuba lukhona)
Sitshintsha izinto kuphela xa zinesiphene okanye zonakele. Ukuba ufuna ukuyitshintshela kwinto enye, thumela i-imeyile ku sales@cleaninghub.co.za kwaye uthumele into yakho kwi: A7 City Oriental City. Indlela endala yeJhb. ICenturion Pretoria RSA 1004.
Ukuba into iphawulwe njengesipho xa ithengiwe kwaye ithunyelwe ngqo kuwe, uya kufumana ikhredithi yesipho ngexabiso lokubuya kwakho. Nje ukuba into ebuyisiweyo ifunyenwe, isatifikethi sesipho siya kuthunyelwa kuwe.
Ukuba loo nto ayibhaliswanga njengesipho xa uthengiwe, okanye umniki-sipho uye wathunyelwa kuye wayalela ukuba akunike kamva, siya kuthumela imbuyiselo kulowo umnike isipho kwaye uya kufumanisa malunga nokubuya kwakho.
Ukubuyisa imveliso yakho, kufuneka uthumele imveliso yakho kwi: Shop A7. Isixeko saseMpuma. Indlela endala yeJhb. ICenturion Pretoria ZA 1004
Uya kuba noxanduva lokuhlawula iindleko zakho zokuhambisa ngokubuyisa into yakho.
Iindleko zokuthumela ngenqanawa azibuyiswa. Ukuba ufumana ukubuyiselwa imali / ikhredithi, naziphi na iindleko esinokuzifumana ekubuyiseleni ukuthunyelwa ziya kuncitshiswa kwimbuyekezo yakho.
Kuxhomekeka kwindawo ohlala kuyo, ixesha elinokuthatha ukuba imveliso yakho etshintshelweyo ifike kuwe, inokwahluka
Ukuba uthumela into engaphezulu kwe-R75, kuya kufuneka ucinge ngokusebenzisa inkonzo yokuhambisa umkhondo okanye ukuthenga i-inshurensi yokuthumela. Asikuqinisekisi ukuba siza kuyifumana into yakho ebuyisiweyo.
Abathengi banoxanduva lokuhambisa kunye nokuqokelela okulandelayo kwabo nabuphi na oomatshini / iimpahla ezibuyiswe phantsi kwemiqathango yesiqinisekiso sethu kwiVenkile A7, kwisiXeko saseMpuma, kwiCenturion